ရန် Login လုပ်နည်း 192.168.1.254?: Router ၏ Password ကိုထိုအ Configuration ကို Reset လုပ်ဖို့ကဘယ်လိုတွင်အဆင့်လမ်းညွှန်ချက်အားဖြင့်တစ်ဦးကအဆင့်
၏အဒ်မင် Panel ကိုမှ Login လုပ်နည်းအပေါ်ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်အားဖြင့်ဒီအဆင့်မှာ 192.168.1.254, ကျွန်တော်တစ်ဦးချင်းစီခြေလှမ်းနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များမှာကြည့်ရပါလိမ့်မယ်.
IP Address ကိုကဘာလဲ 192.168.1.254?
192.168.1.254 ကွန်ရက်ပေါ်တွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အလို့ငှာအနည်းငယ်မော်ဒယ် router များကအသုံးပြုထားတဲ့ IP address ကိုဖြစ်ပါတယ်. 192.168.1.254 ယင်းအတွက်လိပ်စာများကိုတစျဦးဖွစျသညျ “ပုဂ္ဂလိကကွန်ယက်ကို 16-bit နဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုလိပ်စာအာကာသ” အရာပုဂ္ဂလိကကွန်ရက်များအတွင်းသာသုံးနိုင်တယ်.
ဤ IP လိပ်စာအဘို့ဤအာကာသပါဝင်ပါသည် 65,536 သေးငယ်တဲ့အိမ်မှာကွန်ရက်များအတွက်လုံလောက်သောဖြစ်သက်သေပြရာလိပ်စာများ. ထုံးစံအတိုင်း, အိမ်သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကွန်ရက်များဒီရုံများအနက်အချို့သာလျှင်အသုံးပြုရန်နှင့်အများဆုံး router များ၏အကွာအဝေးကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်း 192.168.1.0 – 192.168.1.255 သူတို့ရဲ့ကွန်ယက်.
192.168.1.254 IANA ကနေစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အကွာအဝေးလာရာပုဂ္ဂလိက IP လိပ်စာဖြစ်ပါသည်(နံပါတ်အာဏာပိုင် Assigned အင်တာနက်ကို) အထူးရည်ရွယ်ချက်. သင်တစ်ဦး modem သို့မဟုတ် Router ကဝယ်ယူလိုက်တဲ့အခါ, ဒါကြောင့်သင့် router setting များကိုအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်သော Router ကကို log in ကိုဘယ်လိုအကြောင်းကိုအထောက်အထားများနှင့်အတူကြွလာ. ပုဂ္ဂလိက IP လိပ်စာများအဘယ်သူမျှမပဋိပက္ခများရှိပါတယ်သေချာနှင့်မျှမ-One အခြားသင့်ရဲ့ကွန်ယက်ကို log in နိုင်ပါတယ်.
ပုဂ္ဂလိကကွန်ရက်များအတော်လေးလူကြိုက်များလာပြီဖြစ်ကြောင်း. မကြာသေးမီကသတင်းနှုန်းအဖြစ်, IANA( နံပါတ်အာဏာပိုင် Assigned အင်တာနက်ကို) IPv6 addresses များလာမယ့်မျိုးဆက်အဘို့များစွာသောတိကျတဲ့လိပ်စာလုပ်ကွက် reserved ထားပါတယ်. သောကြောင့်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များ, အများအပြားများစွာသော corporate ပုဂ္ဂလိကလိပ်စာများကိုပိုနှစ်သက်. ကွန်ရက်များ၏ထိုကဲ့သို့သောမျိုးအတွက်, အဲဒီမှာအမြဲတမ်းအင်တာနက် access ကိုကန့်သတ်နှင့်မကြာခဏ proxy ကိုဝဘ်ဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်.
192.168.1.254 username & Password ကို
တိုင်း router ကိုနှင့် modem ကို router ၏ setting ကိုရယူနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးကို default IP address ကိုနှင့်ရဲ့ login အထောက်အထားများရှိပါတယ်. IP လိပ်စာ 192.168.1.254 TP-Link ကိုများကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသော router များ၏ setting ကိုဝင်ရောက်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, ADSL router များ, 2သံကြိုး, 3com router များ, စသည်တို့ကို.
ကို default gateway ကို access လုပ်ဖို့လိုအပ်ချက်:
သင်တစ်ဦး browser ကို access လုပ်နိုင်ရှိရာတစ်ဦးက system ကို
【 192.168.1.254 】- အဒ်မင်ဝင်မည် & router Setup ကိုလမ်းညွှန် 2019
လှမ်း 1: သင့်ရဲ့ PC မှာ browser ကိုဖွင့်ပါနှင့် default အနေနဲ့ IP address ကိုရိုက်ထည့်ပါ 192.168.1.254 အတွက်သင့် router ဒီသတ်သတ်မှတ်မှတ် IP လိပ်စာရှိပါတယ်လျှင်ရှာဖွေရေးဘားနှင့် login page ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်.
လှမ်း 2: အဆိုပါ admin ရဲ့ panel ကမှ login ဖို့ username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ပါ. အမှု၌သင်တို့ကို username နှင့် password ကိုသိသို့မဟုတ်မမေ့မလြော့ပါ, ရိုးရှင်းစွာအကြောင်းကိုများအတွက်ပြန်လည်သတ်မှတ်မှုခလုတ်ကိုကိုင်ထားစာနယ်ဇင်း-and အားဖြင့်က default settings ကိုရန် router ကို reset 10 သို့ 15 စက္ကန့်.
လှမ်း 3: ဒါဟာသင့်ရဲ့ကွန်ယက်ကို tab မှာအခြားသူများမြင်နိုင်ကွန်ယက်အမည်ကားသော Router က၏ SSID သို့ပြောင်းလဲပစ်ရန်အကြံပြုသည်.
တိုတောင်းသောကြောင့်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားပါ & လွယ်ကူသော
သင့် router ၏အမည်အဖြစ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်မဆိုမသုံးပါနဲ့.
အဆိုပါပုံမှန် Username နှင့် Password ကိုပြောင်းလဲနည်း
ပုဂ္ဂလိက IP Address ကိုအသုံးပြုပြီး admin ရဲ့ panel ကရယူသုံးခြင်းဖြင့်သင့် router ၏ default settings ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် 192.168.1.254 နိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ connection ကိုလုံခြုံကြောင်းသေချာစေရန်.
က default username နှင့် password ကိုပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက်အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်.
ပထမဦးစွာ IP address ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကို default gateway ကို access 192.168.1.254.
ထိုအခါ username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့် Wi-Fi setting ကိုကြည့်ရှု (နည်းလမ်းများကွဲပြားခြားနားသည် router / modem များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောများမှာ), သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်တီဗီရှိပါက & wifi ထို့နောက်နေအိမ်ကွန်ယက်ကိုသုံးပါနှင့်ကြိုးမဲ့ router ကို option ကိုရှေးခယျြ. Device ကို Code ကိုအတွက်တဲ့အခါမှာမေတ္တာရပ်ခံအမျိုးအစား (တစ်ဂိတ်ဝေး၏ဘက်မှာတွေ့ရှိခဲ့). သင်တစ်ဦးအမည်နှင့် SAVE ပြောင်းလဲနိုင်သည်
ကို default password ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်, သင်ထွက် grayed password ကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာ WPA / PSK encryption ကို setting များကို select လုပ်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ်. အခုတော့စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ကယ်တင်.
သင့်ရဲ့ username နဲ့ password ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်သိကောင်းစရာများ:
သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုသူဖြစ်ရမည် 8-16 ဇာတ်ကောင်ရှည်လျားမှတ်မိဖို့လွယ်ကူပါတယ်
သငျသညျ IP address ကိုများအတွက် username နှင့် password ကိုမှတ်သားရပါမည် 192.168.1.254 အမှု၌အနာဂတ်ရည်ညွှန်းဘို့သင့်ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့မေ့.
အဘယ်ကြောင့်ငါသည်ငါ့ router ကိုမချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်: http://192.168.1.254
လူအများစုဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သေးငယ်တဲ့စာရိုက်အမှား၏ default အရဲ့ login panel ကိုမချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျကို http သို့မဟုတ် https ပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမ semicolon ပေမယ့်တစ်ဦးအူမကြီးရှိကွောငျးသေချာအောင်ရန်ရှိသည်. မှန်ကန်သောလိပ်စာဖြစ်ပါသည် 192.168.1.254
ငါ IP address ကို username နှင့် password ကိုမေ့လျှင်အဘယ်အရာကို?
သငျသညျသစ်တစ်ခု router သို့မဟုတ် modem ရတိုင်း, သငျသညျ box ကိုပေါ်ဒါမှမဟုတ်လက်စွဲစာအုပ်အပေါ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ် encrypted ဖြစ်ကြောင်း default settings ကို get. သင်တို့သည်လည်းသင်၏ ISP ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် (Internet Service Provider) default settings ကိုရဖို့.
တစ်ဦး router ကို Reset လုပ်ဖို့ခြေလှမ်း – သင့်ရဲ့ Router Reset လုပ်နည်း
သင့် router ကို turn off.
အကြောင်းကိုများအတွက်ပြန်လည်သတ်မှတ်မှု button ကို press-and ကိုင် 10-15 ထို့နောက်ထိုကဲ့သို့သောအပ်ကဲ့သို့ချွန်အရာဝတ္ထုကို အသုံးပြု. စက္ကန့်နှင့် Router ကဖွင့်.
Router ကို reboot လုပ်ပါစေခလုတ်ကိုလွှတ်ပေးရန်
အခုတော့က default settings ကိုသုံးပြီး wifi connection ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ကွန်ယက်ကို cable ကိုနှင့်ရဲ့ login အသုံးပြု. Router ကို ချိတ်ဆက်..
သတိပေးခြင်း: တစ်ဦး router ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအပေါငျးတို့သယခင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏အသေးစိတ်ကိုနဲ့ settings တွေကိုဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာစက်ရုံ default အနေနဲ့သို့သင့် router ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါ 192.168.1.254 IP address ကိုတစ်ဦး network ပေါ်မှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့အများကြီး router များကအသုံးပြုသောပုဂ္ဂလိက IP လိပ်စာဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအစဉျအမွဲသင့် router ၏ setting များကိုပြောင်းလဲပစ်ချင်လျှင်သင် admin ရဲ့ panel ကဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာစိတ်တွင်ဤ IP address ကိုစောင့်ရှောက်သင့်တယ်.